Yakagadziridzwa | Nyowani COVID Zvibvumirano muHawaii kune Vashanyi & Vagari
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Yakagadziridzwa | Nyowani COVID Zvibvumirano muHawaii kune Vashanyi & Vagari
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hotera & Resorts • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Dhinda Musangano weHawaii Gavhuna Ige Nyamavhuvhu 10
Hawaii yakabva pakuderera kwakaderera kwehutachiona hweCVVID, kuenda kunhamba dzekudzivirira dzepamusoro muUnited States, kune mamwe akanyanya hutachiona huwandu, nepo kushanya kuri kuwedzera. Nhasi Gavhuna Ige akaita mushure mekunge zvipatara zvave kuzadza kugona mu Aloha Nyika.
Gavhuna weHawaii Ige akati mitezo mitsva yevagari nevashanyi inoitwa nekukasira
Gavhuna weHawaii David Ige akazivisa matanho matsva ekuderedza kupararira kweiyo COVID-19 Delta musiyano mudunhu.
Unyanzvi mumaresitorendi, gyms, marongero emukati akaiswa pa50%.
Vatariri muzvivakwa senge maresitorendi anofanirwa kuve matanhatu tsoka akapatsanuka.
With the COVID inowedzera kunze kwekudzora muHawaii, kudiwa kwekuchengetedza indasitiri yekufambisa uye yekushanya iri kuwedzera ingangodaro yakanonotsa zvirambidzo zvakaiswa nhasi naGavhuna David Ige.
Vazhinji vashanyi uye vagari vanogona kunge vari kunyanyisa kusununguka mukutora zvirambidzo zvakakomba.
Inosanganisira vanoparadzanisa vanoputsa, marekodhi ekunyepa ekudzivirira maCDC, uye kuungana zvisiri pamutemo. Gavhuna akati kutyorwa kwakadai kunotongwa zvine chisimba, asi hapana huwandu hwakakwana hwevashandi mubazi remapurisa kudzingirira vese vanotyora.
Kubva nhasi maresitorendi, mabhawa, majimu muHurumende yeHawaii inofanirwa kubata nezvirambidzo zvakare.
Nzvimbo dzakadai dzinotenderwa kugara dzakavhurika, asi muganho unokwanisa kusvika 50%.
Kunonyanyisa kugona kwemukati pazvitoro uye dzimwe nzvimbo kune gumi, kunze kuri makumi maviri neshanu.
Nemaresitorendi mazhinji munzvimbo dzevashanyi senge Waikiki inogara ichimhanya munzvimbo pasina zvirambidzo izvi, ichi chichava chinetso zvakare kuHawaii iri kuwedzera kufamba uye indasitiri yekushanya.
Kurambidzwa zvakapfava kana zvichienzaniswa nekuzara kwakakiyiwa akaiswa panzvimbo gore rapfuura aine huwandu hwehutachiona hwakaderera zvakanyanya kupfuura izvozvi
Gavhuna akadzivisa mhinduro kana zvikanganiso zvikaiswa pahotera kugona uye haana kupindura eTurboNews pamusangano wenhau nhasi.
Gavhuna akati hapazove neshanduko kana zvimwe zvirambidzo kune vafambi vanoda kushanyira iyo Aloha Nyika. Iyo yakachengeteka yekufamba chirongwa zvicharamba sezvazviri nevashanyi vakabaiwa vanokwanisa kusvika vasina mimwe bvunzo.
Gavhuna akabvuma kuti pakanga paine kushomeka mukuyedza.
Michato, mariro, chechi, makonzati, uye zviitiko zvemitambo nevanhu makumi mashanu nevanhu vazhinji vanofanirwa kutanga vatenderwa nevakuru veKanzuru.
Mumazuva ano musangano wevatori venhau meya kubva kuHawaiian Islands ese ari kutsigira danho naGavhuna Ige.
Meya muMaui ainetseka nezvezvipatara nemaICU anoshanda pamusoro pehuwandu.
Anoti kana vanhu vachitsvaga mabasa ekukurumidzira muzvipatara uye vasingakwanise kuendesa, uyu mutsetse mutsvuku, uye isu taifanira kutora matanho.
Mashoko chaiwo eEmergency odhiyo naHawaii Gov. Ige
DZIDZISO YEMAHARA NO. 21-05
(Nyika dzese Miganhu yeKusangana Kwemagariro, Mahotera, Mabhawa,
uye Nzvimbo dzeMagariro)
ZVAKANAKA, munaKurume 4, 2020, ndakapa Chiziviso ndichizivisa nyika ye
chimbichimbi kutsigira inoenderera Nyika uye County mhinduro kuCoronavirus Chirwere
PAPI, ndakazopa zviziviso zvakati wandei zvine chekuita nedenda reCOVID19, kusanganisira zvirevo zvakamiswa mimwe mitemo kuti ikwanise
Hurumende nedunhu zvinopindura COVID-19; uye yakazadzisa yekumanikidza kuzvisarudzira kwevanhu vese vanopinda muHurumende uye vanofamba pakati pematunhu, akarairwa
maitiro akachengeteka ekuderedza kupararira kwe COVID-19, uye akatanga mushonga uye
mutemo wekuyedza vese veHurumende nedunhu vashandi;
KUNYANYA, Delta, chirwere chinotapukira cheSARS-CoV-2, chakaguma
manhamba emakesi kutenderera pasirese uye muUnited States of America, uye
inoramba ichipararira pamwero unotyisa muHurumende yedu;
APO, iyo Delta musiyano weiyo SARS-CoV-2 hutachiona hwachinja kosi
denda muHurumende yedu nekukurumidza, zvekuti COVID-19 inoramba ichiisa panjodzi
hutano, kuchengetedzeka, uye kugara zvakanaka kwevanhu veHawaii uye inoda izvozvi uye
kutarisisa, kushanda nesimba, uye kuzvipira kwevanhu vese muHurumende kuti vadzivise zvisingadzoreke
matambudziko pahutano hwedu uye zvimwe zvinokanganisa kuHurumende;
KUNYANYA, kunyangwe paine kubudirira kweHurumende kudzikisira uye kuita majekiseni ekudzivirira,
zvichibva pazviitiko zvenguva pfupi yadarika zvichikwira nekukwira kusimuka kweECOVID-19 kesi semhedzisiro ye
iyo Delta musiyano, zvipatara, uye kufa uye kurudziro yakasimba kubva kune yedu
Dhipatimendi rehutano uye dzimwe nyanzvi dzinobatsira mukuenderera mberi kwe COVID-19 mhinduro,
2 pamusoro 3
kuiswa kwemiganhu yenyika yose yekuungana kwevanhu, pamwe nekuwedzera
gadziriro dzeresitorendi, mabhawa, uye nzvimbo dzemagariro zvinodikanwa.
IZVOZVII, Naizvozvo, ini, David Y. Ige, Gavhuna weHawaii, achiteerana neangu
masimba masimba pasi pechinyorwa V cheBumbiro reNyika yeHawaii, chitsauko
127A, Hawai'i Revised Statute, uye nemamwe masimba anoshanda, ita izvi,
kutanga Nyamavhuvhu 10, 2021, zvinotevera:
Yekuitwa kwepasirese kuita uye sekutsanangurwa nedunhu rega (uye mu
zvinoenderana netsananguro dzakatsanangurwa nedunhu rega rega):
a. Kuungana Kwemagariro. Imba yekuungana yekudyidzana inopfuura gumi
vanhu uye kuungana kwekunze kwekushamwaridzana kwevanhu vanopfuura makumi maviri neshanu vanhu zvinorambidzwa.
b. Maresitorendi, Mabhawa, uye Nzvimbo dzeMagariro. Maresitorendi, mabhawa,
uye masisitimendi ezvemagariro achaita anoteedzera anoteedzera uku achichengetedza iyo
inoda hukuru hwekuunganidzwa kwevanhu hwakatarwa pamusoro uye sezvingangodaro zvadudzirwa ne
i. Vatongi vanofanira kuramba vakagara pamwe nebato ravo.
ii. Kureba tsoka nhanhatu kunofanirwa kuchengetedzwa pakati pemapoka.
iii. Hapana kusanganiswa.
iv. Masiki anofanirwa kupfekwa nguva dzese kunze kwekunge uchinyanya kudya
c. Zviitiko Zvehunyanzvi. Zviitiko zvehunyanzvi zvinofanirwa kuteedzera neese mamiriro uye
County maodha, mitemo, uye mirairo maererano nekushanda. Ivo vanoronga nyanzvi
zviitiko zvakakura kupfuura vanhu makumi mashanu (50) vanhu, kuitira kuti vave nechokwadi chemiitiro yakachengeteka, inofanirwa
zivisa uye ubvunze kune yakakodzera County agency zvine musoro pamberi pechiitiko
3 pamusoro 3
d. Kurambidzwa paImba Mukati. Kune ese zviitiko zvine njodzi zvakanyanya, zvemukati
chinzvimbo chakaiswa pa50%. Izvi zvinosanganisira mabhawa, maresitorendi, gyms, uye zvemagariro
Mamiriro ezvinhu epasirese akataurwa pano haazokanganisa mataundi '
COVID-19 marongero maererano nezvimwe zvikamu zvezviitiko.
Nhanho dzese dzakatarwa pano dzicha simbiswa nematare zvichienderana ne
County maodha, mitemo, uye madhairekitori ayo anoratidza kukanganisa nemirango yedunhu rega rega.
Iyi odha inotsiva mashoma anodzvinyirira mirairo, mitemo, kana mirairo yechero ipi ye
macustoms kusvika padanho rakatemwa kuti aite zvisingakwanisike uye zvinorambidzwa
Kunyangwe hazvo zvakarongwa pano, meya wedunhu chero ripi zvaro
inogona kuburitsa mirairo, mirau, kana mirau inoomesesa zvakanyanya.
Kunze kwekunge wakasimudzwa neinotevera odha, iyi Emergency Order icha
kuguma muna Gumiguru 18, 2021.
Yakaitwa ku State Capitol, Honolulu,
Nyika yeHawaii, rino zuva regumi re